जन्मदिनमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर – Rajmarg Online
जन्मदिनमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर
दाङ, मंसिर २२ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ ढोडेनी निबासी मनबहादुर पुनको ८८ औ जन्मदिनको अबसरमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर गरिएको छ ।
८८ बर्षिय पुनको जन्मदिनको अबसरमा उहाका छोराहरु नरेन्द्र पुन र डा. बसन्त पुनले गाउँमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गर्नुभएको हो । शिविरमा ४ सय ८५ जना विरामीले उपचार सेवा लिएका छन् । शिविरमा ५५ जनाले प्याथोलोजी प्राप्त गरेका छन् भने १० जनाले ईसिजि सेवा लिएको नरेन्द्र पुनले जानकारी दिनुभएको छ ।
शिविरमा स्थानीय ८८ वर्षका बृद्ध देखि ६ महिनाको बालबालिकाहरले समेत सेवा लिएको पुनले जानकारी दिनुभयो । शिविरमा धेरै जसो पेटको समस्या भएका विरामीहरु सेवा लिन आएको डा. बसन्त पुनले बताउनुभयो ।
खानपानमा समस्या भएर ग्यास्टिक भएका विरामी, मधुमेह, महिलाका सामान्य समस्याहरु भएका विरामीले सेवा लिएको डा. पुनले बताउनुभयो ।
शिविरमा डा. सुवर्ण बुढा, डा. बसन्त पुनले सेवा दिनु भएको थियो भने एचए टिकाराम पुन, एचए प्रकाश खत्री, अनमी मिरा रोका, अनमी रविना पुन, अनमी रीना पुन, प्याथोलजीमा सचिन पौडेल र दिपक केसीले सेवा दिनुभएको थियो ।
शिविरमा ५ लाख बराबरको औषधीहरु समेत वितरण गरिएको थियो । शिविरका लागि एशियन फार्मेसिटीकल कम्पनीका खिम बहादुर विष्ट, टाईम फार्मेसिटीकल कम्पनीका प्रकाश आचार्य, मार्क फार्मेसिटीकल, नेशनल फार्मेसिटीकल, ओमनिका फार्मेसिटीकल, समर फार्मेसिटीकल, पानस फार्मेसिटीकल, लोमस फार्मेसिटीकल, स्पेक्ट्रा फार्मेसिटीकल, सुवर्ण मेडिकल हलले सहयोग गर्नुभएको पुनले बताउनुभयो ।
शिविरमा घोराही हस्पिटल प्रालीले ईसिजी सेवा र प्याथोलजी सेवा ग्लोबल डाईग्नोस्तिक घोराहीले सहयोग गरेको थियो ।